မာယာ ပြက္ခဒိန်အရ (၂၀၂၀)ခုနှစ် ဇွန်လဟာ ကမ္ဘာပျက်မယ့်လ ဆိုတာ သင်သိ ပါသလား …? – Let Pan Daily
မာယာ ပြက္ခဒိန်အရ (၂၀၂၀)ခုနှစ် ဇွန်လဟာ ကမ္ဘာပျက်မယ့်လ ဆိုတာ သင်သိ ပါသလား …?
မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ အနာဂတ် ဟောကိန်း ပြက္ခဒိန်အရ အခုနှစ် (၂၀၂၀)ခုနှစ် ဟာ ကမ္ဘာပျက်မယ့်နှစ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ရက်အတိအကျအားဖြင့်ဆိုရင် မာယာပြက္ခဒိန်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ အခုနှစ် ဇွန်လ (၂၁)ရက် နေကြတ်မယ့်နေ့ဟာ ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ဖြစ်ကြောင်း အတိအကျ အဖြေထွက် ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မာယာတွေရဲ့ ကမ္ဘာပျက်နေ့စွဲဟာ တက်တက်စင်အောင်ကို လွဲသွားပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့ကို လွန်မြောက်လို့ အခု ဇွန်လ(၂၂)ရက်ဆိုတဲ့ မနက်ဖြန်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ယခင် ဟောကိန်းတုန်း ကလည်း (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ဟောခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးဟာ အဲဒီနှစ်ကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမ ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်း မှာ မာယာပညာရှင်တွေက (၂၀၁၂)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၁)ရက်လို့ ကောက်ယူရသော်လည်း ဘာမှ ထူးခြားတဲ့ ကမ္ဘာပျက်ကိန်းမျိုး မကြုံခဲ့ရပါ။ သို့သော် အခုနှစ်မှာတော့ထူးခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ အညှိုးအာဃာတတွေနဲ့ ဖောင်းပွမှုတွေ ပိုများ လာပါတယ်။ ဒေါသတရားတွေနဲ့ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုမှုတွေဟာ ပိုအားကောင်းလာပါတယ်။လစ်ဗြားနဲ့ အီဂျစ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုဟာ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ အီဂျစ်သမ္မတ Abdel Fattah al-Sisi က စစ်ပြင်ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ တရုတ်-အိန္ဒိယ ကလည်း အခုပဲ ထပြီးတိုက်တော့မယောင် နယ်စပ်အသီးသီးမှာ စစ်အင်အားတွေ ဖြည့်တင်းပြီး၊ စစ်ရေးအရ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ကလည်း အထိအခိုက်မခံတဲ့ နယ်စပ်ပြဿနာတွေကို အိန္ဒိယအတွက် ဖန်တီးပေးပြီး၊ စစ်ဦးအစ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြနေပါတယ်။
တရုတ်ဟာ ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါကို ကန်လက် ကနေ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရေး၊ ကန် ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေနဲ့ တိုင်ပတ်နေချိန်မှာ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်း အမှည့်ခြွေစနစ်နဲ့ တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ ပင်လယ်ရပ်ခြားနိုင်ငံတွေကို ဆိုက်ဘာနည်းနဲ့ စီးပွားရေးကိုလိုနီ နယ်ချယ့်နည်းနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီး၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ် နဲ့ ဆက်စပ်ဧရိယာတွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့ရဲ့ ရေပိုင်နက်တွေကိုပါ တပြိုင်တည်း ခြိမ်းခြောက်နေခဲ့တာပါ။တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကလည်း အခုဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပြိုကွဲသွားပါပြီ။ မြောက်ကိုရီးယားက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရုံးကို ဖြိုချ လိုက်တာပါ။ နောက်ပြီး တောင်ကိုးရီယားဘက်က တစ်ခုခု သည်းမခံနိုင်တာ လုပ်တာနဲ့ စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်အရေးယူမယ်လို့လည်း ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားဘက်ကလည်း မြောက်တို့ရဲ့ နယ်စပ်စည်းအနီးကို စစ်တပ်တွေနဲ့ တိုက်လေယာဉ်တွေ ပို့ထားပြီး ပါပြီ။
လက်ရှိခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အညှိုး အာဃာတတွေက ကမ္ဘာကြီးအတွက် အခုလမဟုတ်တောင် ယခုနှစ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိမလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။NASA ရဲ့ ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်းကတော့ လူရယ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေ အတိအကျ တွက်ချက်ပြီး ကမ္ဘာကို နီဘီရူဂြိုဟ်ကြီးက (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဇွန်လ မှာ ကမ္ဘာကို တိုက်ရိုက် ထိမှန်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိမှန်ခဲ့ရင် ကမ္ဘာမှာ အသက်ရှင်တဲ့လူ နည်းနည်းပါးပါးပဲ ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိတဲ့ အတိုင်း သူရဲ့ ဟောကိန်းလည်း တက်တက်စင် အောင်လွဲ ခဲ့ပါတယ်။ တခြား ရှေ့ဖြစ်ဟော ဆရာတွေ ရဲ့ ဟောကိန်းတွေကလည်း တက်တက် စင်အောင် လွဲနေသေးတာဟာ ကမ္ဘာ အတွက်တော့ အတော်လေးကို အားရစရာပါ။ အခု မာယာဟောကိန်း ကလည်း လွဲနေဆဲပါဘဲ။ တချို့သူတွေက လွန်လေပြီးသော ရှေ့ဖြစ်ဟောဆရာတွေက ဘယ်လို ဟောခဲ့တာဆိုပြီး တကယ်မဟုတ်တဲ့ ဟောကိန်းတွေကို ဖွကြတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခု အချိန်ထိ ကမ္ဘာကြီး သက်ရှည်ကျန်းမာနေတာ ဝမ်းသာစရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref Express/ Zeenews/ Wiki
မာယာ ပွက်ခဒိနျအရ (၂၀၂၀)ခုနှဈ ဇှနျလဟာ ကမ်ဘာပကျြမယျ့လ ဆိုတာ သငျသိ ပါသလား …?
မာယာလူမြိုးတှရေဲ့ အနာဂတျ ဟောကိနျး ပွက်ခဒိနျအရ အခုနှဈ (၂၀၂၀)ခုနှဈ ဟာ ကမ်ဘာပကျြမယျ့နှဈလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ရကျအတိအကအြားဖွငျ့ဆိုရငျ မာယာပွက်ခဒိနျကြှမျးကငျြသူတှရေဲ့ တှကျခကျြမှုအရ အခုနှဈ ဇှနျလ (၂၁)ရကျ နကွေတျမယျ့နဟေ့ာ ကမ်ဘာပကျြမယျ့နဖွေ့ဈကွောငျး အတိအကြ အဖွထှေကျ ထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မာယာတှရေဲ့ ကမ်ဘာပကျြနစှေဲ့ဟာ တကျတကျစငျအောငျကို လှဲသှားပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကမ်ဘာကွီးဟာ ဇှနျလ(၂၁)ရကျနကေို့ လှနျမွောကျလို့ အခု ဇှနျလ(၂၂)ရကျဆိုတဲ့ မနကျဖွနျကွီးကို အောငျမွငျစှာ ခဉျြးနငျးဝငျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ ယခငျ ဟောကိနျးတုနျး ကလညျး (၂၀၁၂)ခုနှဈမှာ ကမ်ဘာပကျြမယျလို့ ဟောခဲ့ပမေယျ့ ကမ်ဘာကွီးဟာ အဲဒီနှဈကို အောငျမွငျစှာ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပထမ ကမ်ဘာပကျြဟောကိနျး မှာ မာယာပညာရှငျတှကေ (၂၀၁၂)ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ (၂၁)ရကျလို့ ကောကျယူရသျောလညျး ဘာမှ ထူးခွားတဲ့ ကမ်ဘာပကျြကိနျးမြိုး မကွုံခဲ့ရပါ။ သို့သျော အခုနှဈမှာတော့ထူးခွားတဲ့ တိုကျဆိုငျမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။ ကမ်ဘာကွီးဟာ အညှိုးအာဃာတတှနေဲ့ ဖောငျးပှမှုတှေ ပိုမြား လာပါတယျ။ ဒေါသတရားတှနေဲ့ နိုငျလိုမငျးထကျပွုမှုတှဟော ပိုအားကောငျးလာပါတယျ။လဈဗွားနဲ့ အီဂဈြတို့ရဲ့ နိုငျငံရေးတငျးမာမှုဟာ အထှတျအထိပျကို ရောကျလာခဲ့ပွီဖွဈပွီး၊ အီဂဈြသမ်မတ Abdel Fattah al-Sisi က စဈပွငျဖို့ အမိနျ့ပေးလိုကျပါပွီ။ တရုတျ-အိန်ဒိယ ကလညျး အခုပဲ ထပွီးတိုကျတော့မယောငျ နယျစပျအသီးသီးမှာ စဈအငျအားတှေ ဖွညျ့တငျးပွီး၊ စဈရေးအရ ခွိမျးခွောကျနပေါတယျ။ ပါကစ်စတနျကလညျး အထိအခိုကျမခံတဲ့ နယျစပျပွဿနာတှကေို အိန်ဒိယအတှကျ ဖနျတီးပေးပွီး၊ စဈဦးအစ စိနျချေါမှုတှေ ပွနပေါတယျ။
တရုတျဟာ ကမ်ဘာ့စူပါပါဝါကို ကနျလကျ ကနေ လှဲပွောငျးရယူနိုငျရေး၊ ကနျ ပွညျတှငျးပဋိပက်ခတှနေဲ့ တိုငျပတျနခြေိနျမှာ တဈခွားနိုငျငံတှကေိုလညျး အမှညျ့ခွှစေနဈနဲ့ တိုကျခိုကျနပေါတယျ။ ပငျလယျရပျခွားနိုငျငံတှကေို ဆိုကျဘာနညျးနဲ့ စီးပှားရေးကိုလိုနီ နယျခယျြ့နညျးနဲ့ စိနျချေါမှုတှေ ပွုလုပျနပွေီး၊ တောငျတရုတျပငျလယျ နဲ့ ဆကျစပျဧရိယာတှဖွေဈတဲ့ ဂပြနျ၊ ဖိလဈပိုငျ၊ ဗီယကျနမျ၊ အငျဒိုနီးရှားတို့ရဲ့ ရပေိုငျနကျတှကေိုပါ တပွိုငျတညျး ခွိမျးခွောကျနခေဲ့တာပါ။တောငျနဲ့မွောကျကိုရီးယားကလညျး အခုဆိုရငျ ငွိမျးခမျြးရေး ပွိုကှဲသှားပါပွီ။ မွောကျကိုရီးယားက နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးရုံးကို ဖွိုခြ လိုကျတာပါ။ နောကျပွီး တောငျကိုးရီယားဘကျက တဈခုခု သညျးမခံနိုငျတာ လုပျတာနဲ့ စဈရေးအရ တိုကျခိုကျအရေးယူမယျလို့လညျး ခွိမျးခွောကျလိုကျပါတယျ။ တောငျကိုရီးယားဘကျကလညျး မွောကျတို့ရဲ့ နယျစပျစညျးအနီးကို စဈတပျတှနေဲ့ တိုကျလယောဉျတှေ ပို့ထားပွီး ပါပွီ။
လကျရှိခွိမျးခွောကျနတေဲ့ အညှိုး အာဃာတတှကေ ကမ်ဘာကွီးအတှကျ အခုလမဟုတျတောငျ ယခုနှဈမှာ သကျရောကျမှုတှေ ရှိမလာဘူးလို့ မပွောနိုငျပါဘူး။NASA ရဲ့ ကမ်ဘာပကျြဟောကိနျးကတော့ လူရယျစရာ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူတို့တဈတှေ အတိအကြ တှကျခကျြပွီး ကမ်ဘာကို နီဘီရူဂွိုဟျကွီးက (၂၀၀၃)ခုနှဈ ဇှနျလ မှာ ကမ်ဘာကို တိုကျရိုကျ ထိမှနျမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ထိမှနျခဲ့ရငျ ကမ်ဘာမှာ အသကျရှငျတဲ့လူ နညျးနညျးပါးပါးပဲ ရှိမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိတဲ့ အတိုငျး သူရဲ့ ဟောကိနျးလညျး တကျတကျစငျ အောငျလှဲ ခဲ့ပါတယျ။ တခွား ရှဖွေ့ဈဟော ဆရာတှေ ရဲ့ ဟောကိနျးတှကေလညျး တကျတကျ စငျအောငျ လှဲနသေေးတာဟာ ကမ်ဘာ အတှကျတော့ အတျောလေးကို အားရစရာပါ။ အခု မာယာဟောကိနျး ကလညျး လှဲနဆေဲပါဘဲ။ တခြို့သူတှကေ လှနျလပွေီးသော ရှဖွေ့ဈဟောဆရာတှကေ ဘယျလို ဟောခဲ့တာဆိုပွီး တကယျမဟုတျတဲ့ ဟောကိနျးတှကေို ဖှကွတာမြိုး ရှိပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ အခု အခြိနျထိ ကမ်ဘာကွီး သကျရှညျကနျြးမာနတော ဝမျးသာစရာပဲ ဖွဈပါတယျ။
လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ပုံမှန်သွေးလှူဒါန်းခြင်း ရဲ့ အံ့ဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ
“တခြား သူတွေ နဲ့ ယှဉ်ရင် အောင်မြင် ကြီးပွားဖို့ ငါအရမ်းနောက်ကျနေပြီလား…” အချိန် မရလဲ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါ..